किन गरे एनसेलका प्रबन्धक सञ्चालकले राजीनामा ? – " कञ्चनजंगा News "
किन गरे एनसेलका प्रबन्धक सञ्चालकले राजीनामा ?
No Comments on किन गरे एनसेलका प्रबन्धक सञ्चालकले राजीनामा ?
काठमाडौं : निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलका प्रबन्ध सञ्चालक सुरेनजे अमरासेकराले राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामा वैशाख २७ गते स्वीकृत भएको हो।
एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आजियटाले उनलाई २०७४ असारमा प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । पारिवारिक कारण देखाउँदै उनले राजीनामा दिएको बताइएको छ।
काठमाडौं । विदेशी लगानीको दूरसंचार कम्पनी एनसेलले करोड खर्च गरी अर्ब लुट्ने योजनाका लागि चलखेल बढाएको छ । विभिन्न निकायमा रहेका शक्ति केन्द्रलाई करोडसम्मको प्रभावमा राखी ३० अर्ब राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकमबाट उन्मुक्तिका लागि उसले प्रयास गरिरहेको छ । सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यमको दबाबमा झन्डै १० अर्ब कर तिरेको एनसेलले बाँकी झन्डै ३० अर्बभन्दा बढी करबापतको रकम छुट गर्नुपर्ने र त्यसबापत कर कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारका केही कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिने भन्दै डिल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
एनसेलका अधिकारीहरू स्वंय केही राजनीतिक दलका नेताहरूसम्म लोभलाग्दो प्रस्ताव लिएर गइसकेका छन् । यसै क्रममा ठूला कर कार्यालयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलसमेत व्यक्तिगत लाभ आउने लोभमा एनसेलले तिर्नुपर्ने बाँकी रकम नतिरे हुने भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न थालेका छन् । पौडलेलाई सतीशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यले पटक–पटक भेटेर एनसेलले तिर्नुपर्ने रमक मिनहा गर्नुपर्ने र जसरी पनि मिलाउन भनेका छन् । आचार्य दाजुभाइले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रीलगायतलाई मिलाइसकेको भन्दै हिँडिरहेका छन् । स्मार्ट फोनका सञ्चालक आचार्य दाजुभाइले एनसेल खरिद गरेपछि उनीहरू एनसेलको कर मिनहा गर्न लागिपरेका छन् ।
एनसेल प्रकरणमा अहिले अख्तियारले पनि खासै चासो देखाएको छैन । अख्तियार अधिकारीकहाँ पनि एनसेलले मोटो रकमको प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पिए राजेश बज्रचार्यले घर, गाडीको प्रलोभनमा परेर कर मिनहा गर्ने लबिङमा लागेका छन् । कर छुट भए आचार्यद्वयले प्रधानमन्त्रीका पिएलाई समेत आकर्षक अफर गरेका छन् । आचर्य दाजुभाइको आजकाल बास नै प्रधानमन्त्री निवास भएको छ । त्यसको व्यस्थापन राजेशले मिलाउने गरेका छन् । ठूला कर कार्यालयका प्रमुख पौडेल पनि आचार्य दाजुभाइसँगको मिलेमतोमा कर छुट गर्ने प्रस्ताव लिएर राजनीति लबिङमा लागेको स्रोतको दाबी छ । पौडेल र आचार्य दाजुभाइले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पिए राजेश बज्राचार्य र एक जना सालीका छोरा पर्ने नाताका व्यक्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष लबिङ गरेका छन् । त्यसबापत बज्राचार्यलगायत सचिवालयको टिमलाई आर्कषक लोभ देखाइएको स्रोतले बताएकोछ ।
← तिर्ने भाडा वर्षको ५१ हजार, उठाउने दिनकै लाख → टेलिभिजन सेटको इतिहासमै पहिलोपटक आवाजबाटै नियन्त्रण हुने एलजीको टीभी